Manamafy ny sisintany miaraka amin’i Belarosia i Polonina satria mihamafy ny krizim-pifindra-monina · Global Voices teny Malagasy
Mpifindra monina an'arivony no mijanona ao amin'ny sisintaniny Belarosia-Polonina
Voadika ny 16 Novambra 2021 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, українська, Español, Ελληνικά, عربي, English
Ny fiatoana eo amin'ny sisintany Poloney miaraka amin'i Belarosia, 8 Novambra 2021. Pikantsary avy amin'ny horonan-tsarin'ny RFE/RL/Minisitry ny Fiarovana Poloney.
Niampanga an'i Belarosia ho “nanafika” ny sisin-taniny atsinanana sy mikarakara “krizim-pifindra-monina” ny manampahefana Poloney. Tonga ny fiampangana satria nitombo ny isan'ireo mpifindra monina avy any Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo, ary i Afrika mivory eo amin'ny sisintanin'ny firenena roa tonta ka nanandrana niditra tao Polonina, na tao Litoania sy Letonia koa.
Tamin'ny 8 Novambra, nandefa lahatsary antserasera ny governemanta Poloney izay voalaza fa naka sary ireo fikasana maromaro nataon'ireo vondrona mpifindra monina hamakivaky ny fefy tariby hareza eo amin'ny sisintany, araka ny voalazan'ny RFE/RL.
Taorian'ny fihoaram-pefy, nanao fivoriana maika ho an'ny parlemanta i Polonina, ka nanameloka ny fihetsiky ny fanjakana Belarosiana sy ny tafiky ny sisintany ireo manampahefana. Nilaza ny praiminisitra Mateusz Morawiecki fa manana “atidoha mikotrika ao Moskoa” ny fihetsik'i Belarosia ary nanome tsiny ny Filohan'i Rosia Vladimir Potinina ho nanohana ilay lehilahy mahery Belarosiana, Alyaksandr Lukashenka.
“Manafika ny sisintany Poloney, sy ny Vondrona Eoropeana, amin'ny fomba tsy manam-paharoa ny fitondrana Belarosiana”, hoy ny filoha Poloney Andrzej Duda nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao Varsovia tamin'ny 9 Novambra.
Manana tobin'ny mpifindra monina izahay ankehitriny izay voasakana ny avy amin'ny lafiny Belarosiana. Misy olona eo amin'ny 1 000 eo, ary tanora ny ankamaroany. Tsy maintsy foanantsika ireo hetsika mahery setra, manatanteraka ny adidintsika amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana antsika.
Efa niampanga an'i Lukashenka ho nitondra mpifindra monina avy any Afovoany Atsinanana, Afrika Avaratra sy Azia Atsimo ary nitondra azy ireo tany amin'ny sisintanin'ny Vondrona Eoropeana namakivaky an'i Belarosia ho faritra fandalovana hamaliana faty ny sazy napetraky ny mpitondra Eoropeana noho ny famoretana feno herisetra nataon'ny manampahefana hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena nampiadi-hevitra tamin'ny taon-dasa ny Vondrona Eoropeana.
Naneho hevitra momba ny fanafihana farany tao amin'ny Twitter ny mpitarika ny mpanohitra Sviatlana Tsikhanouskaya, nilaza fa misy fiantraikany amin'ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao ny krizy ao Belarosia.
Aoka hotsaroantsika: tsy nanomboka omaly na iray volana lasa ny krizin'ny mpifindra monina ao amin'ny sisintany Belarosia. Nanomboka tamin’ny krizin'ny politika tao Belarosia tamin'ny herintaona izany. Ampihorohoron'ny fitondrana ny Belarosiana ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia ataony toa izany i ??,??,??,??, ireo firenena demaokratika hafa. Aza avela hanao kendaroroka anao ny mpanao didy jadona.
Mpifindra monina an'arivony no mijanona ao amin'ny sisintany Belarosia-Polonina, miaina hatsiaka tafahoatra, zara raha manana sakafo, rano sy akanjo mafana. Na dia voasakana tsy hiditra ao Polonina aza izy ireo, dia tsy afaka miverina any Belarosia ihany koa, satria raràn'ireo mpiambina sisintany Belarosiana tsy hiditra ao amin'ny firenena izy ireo. Niampanga ireo mpisafo sisintany Belarosiana ho “nanampy ireo mpifindra monina handrava ny sakan-dalana amin'ny sisintany” ihany koa ny mpitondra tenin'ny sampan-draharaha manokana Poloney .
Naka sary vondrona manampahefana #Belarus maro izay nanatona ny tobin'ny mpifindra monina ireo mpiambina ny sisintany poloney
Nantsoin'ny Minisiteran'ny Fiarovana Belarosiana ho “tsy mitombina” ny fiampangan'ny Poloney ary nandà ny fanamboamboarana ny krizin'ny fiifindra-monina. Niampanga an'i Polonina sy ny sisa amin'ny Vondrona Eoropeana ho nanitsakitsaka ny zon'olombelona tamin'ny fandavana ny famelana ireo mpifindra monina hangataka fialokalofana kosa ny governemantan'i Lukashenka.
Tamin'ny 9 Novambra, nanambara fanjakana latsaka an-katerena tany amin'ny sisin-aniny miaraka amin'i Belarosia sy teo amin'ny toerana misy ny toby fampiantranoana mpifindra monina tonga avy any (Belarosia) i Litoania. Tany am-piandohan'ny volana septambra 2021, Polonina no lasa firenena Vondrona Eoropeana voalohany nanambara fanjakana latsaka an-katerena tao amin'ny faritanin'i Podlaskie sy Lubelskie voivodeships, tamin'ny filazana fisian'ny “fandrahonana ny olom-pirenena sy ny filaminam-bahoaka”. Ao anatin'ny fepetra hamehana, nampitombo ny isan'ny miaramila sy mpiambina hatramin'ny 20.000 teo amin'ny sisin-tany ifanolorany amin'i Belarosia i Polonina. Nankatoavin'ny mpanao lalàna Poloney ihany koa ny fananganana rindrina mitentina 407 tapitrisa dolara ao amin'ny sisintaniny atsinanana.